ROCPLEX Melamine Board dia kitay vita maotera misy kalitao sy azo ampiharina, ampiasaina betsaka amin'ny haingon-trano, famokarana cupboard, fanamboarana fanaka sns.
Izy io dia tontonana miorina amin'ny hazo vita maotera, mety indrindra ampiasaina amin'ny indostrian'ny fananganana ho an'ny tanjona struktural na tsy rafitra.
ROCPLEX Packing Plywood dia kitapo fonosana misy kalitao sy azo ampiharina, ampiasaina be amin'ny paleta, boaty fanangonana, fananganana rindrina, sns.
ROCPLEX Fomba maharitra azo tanterahina maharitra kokoa amin'ny kitapom-batsy, taratra, lohateny ary tsanganana an'ny ROCPLEX no ampiasaina amin'ny fampiharana ara-drafitra mba hitondra enta-mavesatra mavesatra faran'izay kely lanja.
ROCPLEX HPL dia fitaovana fananganana fireproofing ho an'ny haingon-trano ambony, vita amin'ny taratasy kraft eo ambanin'ny fizotran'ny melamine sy ny resina phenolika. Ny fitaovana dia vita amin'ny alàlan'ny hafanana ambony sy ny tsindry.
ROCPLEX Film Faced Plywood dia hazo goavam-be avo lenta rakotra horonantsary voadinika resin phenolika izay lasa film miaro mandritra ny famokarana.
Ny hoditr'akanjo varavarana ROCPLEX misy endrika bobongolo eo amin'ny 80 eo am-pelatanantsika, azontsika atao ny manome fahafaham-po ny fangatahan'ny mpanjifa rehetra momba ny karazan-kazo mahazatra sy ny fandokoana natao ho an'ny hoditry ny varavarana ROCPLEX®.
ROCPLEX pine plywood dia vokatra avo lenta avoakan'ny vatan-kazo an-dranomasina 4 'x 8' misy hateviny manomboka amin'ny ⅛ ”ka hatramin'ny 1 ″.
Rocplex Antislip Film Niatrika gitara
ROCPLEX antislip plywood dia plywood birch 100% mahery nopetahany fisaronana sarimihetsika phenolika tantera-drano maharitra sy mateza ary mafy.